IPixel 3a kaGoogle isondele kunangaphambili. Ngaba iya kuhanjiswa ngo-Epreli? | I-Androidsis
IGoogle Pixel 3a isondele kunanini na ngaphambili: iGoogle icebisa kuphehlelelo olusondeleyo
UNerea Pereira | | Iiselfowuni, Izaziso
Nokuba iinyanga ezi-6 zidlulile okoko i-Google Pixel 3 kunye neGoogle Pixel 3 XL zaziswa ngokusesikweni yingcali yezobuchwephesha. Siyazi ukuba inkampani esekwe kwiCupertino isebenza kwiimodeli ezimbini ezingenavithamini kwaye, ngokwembonakalo yayo, i IGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL ziyeza kwakamsinya.
Ayiloxesha lokuqala ukuba wena Sathetha malunga nedatha malunga nePixel 3a kunye nohlobo lwayo olunamavithamini, kodwa ngeli xesha yayinguHiroshi Lockheimer, usekela mongameli omkhulu we-Android kuGoogle, owathetha "ngefowuni engapapashwanga" kwinethiwekhi yoluntu iTwitter. Kwaye kusekho okungakumbi.
1 U-Hiroshi Lockheimer, ubunzima obunzima kwiinqununu ze-Android ze-Android ekuqalisweni kwePixel 3a
2 Olu iya kuba luhlu oluphakathi lwesahlulo seGoogle somnxeba: iPixel 3a kunye nePixel 3a XL
2.1 Ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa kwePixel 3a kunye nePixel 3a XL
U-Hiroshi Lockheimer, ubunzima obunzima kwiinqununu ze-Android ze-Android ekuqalisweni kwePixel 3a
Ngelo xesha, uHiroshi omdala olungileyo wakhankanya "ifowuni engapapashwanga" kwinethiwekhi yakhe, njengoko besitshilo ngaphambili. Kwaye ngoku ubonakalisile ukuba uthathe iifoto ngale fowuni ingaqondakaliyo kodwa ngekhe ungabelani nabanye ngayo. Yiza, nangona ingazivezi ezinye iinkcukacha ngesixhobo, kuyacaca ukuba uHiroshi usebenzisa ifayile ye Pixel 3a okanye iPixel 3a XL.
Njengoko kubonisiwe kwiakhawunti yakhe ye-Twitter, kutyelelo olunye uthathe ithuba lokuthatha iifoto ngale fowuni inzima, kungoko sinokuthatha ukuba usekela-mongameli omkhulu we-Android kuGoogle ngoku usebenzisa iPixel 3a okanye iPixel 3a XL njengefowuni eqhelekileyo. Isicwangciso esisetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iinkampani ukuvavanya indlela i-terminal esebenza ngayo.
Olu iya kuba luhlu oluphakathi lwesahlulo seGoogle somnxeba: iPixel 3a kunye nePixel 3a XL
Kuze kube ngoku, i-Mountain View-based giant yayijolise ekungeniseni iiterminal eziphezulu, umgca wayo owaziwayo wePixel, ukuze ukwazi ukujamelana nobunzima becandelo. Kodwa kubonakala ngathi ekugqibeleni uqaphele ukuba esi sicwangciso asisebenzi njengoko kufanelekile, akukho nto ingako anokuyenza ngokuchasene nezilwanyana ezinje Samsung Galaxy S10 okanye kutshanje thaca Huawei P30 Pro, ke igqibe kwelokuba ihlasele enye intengiso: phakathi kuluhlu.
Kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba, ngokwamahemuhemu amva nje kunye nokuvuza malunga nesixhobo, i IPixel 3a entsha kaGoogle kunye nePixel 3a XL Abayi kuba nomzimba owenziwe ngezinto ezintle njengoko kwenzekile nabantakwabo abadala. Ngale ndlela, omkhulu uG uza kubeka ecaleni isinyithi kunye neglasi yokubonelela nge-chassis eyenziwe nge-polycarbonate, into enexabiso eliphantsi eya kuthi inciphise kakhulu iindleko zokuvelisa.
Kule nto kufuneka kongezwe umahluko kwiiphaneli zayo, kuba iPixel 3a iya kuba nefayile ye- Iscreen se-intshi eyi-5.6 ngesisombululo seepikseli ezingama-2.220 x 1080 (i-HD epheleleyo + ngefomathi yayo yomhlaba), ngelixa eyona modeli inevithamini yoluhlu oluphakathi lukaGoogle, iPixel 3a XL iya kuhlala kwii-intshi ezi-6. Kwelinye icala, kwaye njengoko bekulindelekile, ezi modeli zintsha ziya kuncitshiswa i-vitamin kunabazalwana babo abadala.
Ngale ndlela, amarhe acebisa ukuba iPixel 3a kaGoogle izakunyusa iprosesa yeQualcomm, kanye le Snapdragon 670 SoC, ngelixa iPixel 3a XL iyakuba neprosesa ye-Snapdragon 710. Ewe kunjalo, zombini iimodeli ziya kufika zinokuqwalaselwa okufanayo kwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. I-4GB kunye ne-64GB ngokwahlukeneyo. Ukucwangciswa okungaphezulu kokulingeneyo ukuba nako ukuhambisa nawuphina umdlalo okanye usetyenziso ngaphandle kwengxaki.
Kwaye cIkhamera yePixel 3a kunye nePixel 3a XL? Kulungile okwangoku kuyothusa, nangona kulindelwe ukuba bayokukhwela kwa-12 megapixel snesor efanayo ebonwe kwiPixel 3 kunye nePixel 3 xL, ke kuyabonakala ukuba icandelo lokufota liya kuba lelinye lamandla ezi zixhobo, Ukongeza, kuya kubakho imveliso eyi-3.5 mm yokuqhagamshela ii-headphone. Ukubuya, ukuxhathisa uthuli kunye namanzi akunakufikelela kwezi ndawo zintsha.
Ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa kwePixel 3a kunye nePixel 3a XL
Eyona nto isengqiqweni kukuba kuzo zombini ezi modeli zingeniswe ngokusesikweni ngaphakathi kuGoogle I / O 2019 eya kuthi ikhuphe ukuqala kwayo ngoMeyi 7 ukuya ku-9 eMountain View, ukongeza ekufikeleleni kwixabiso eliza kuba malunga ne-400-450 Iiyure.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IGoogle Pixel 3a isondele kunanini na ngaphambili: iGoogle icebisa kuphehlelelo olusondeleyo
IHuawei P30 Pro, ingaphezulu kwekhamera yesifo sentliziyo [Uphengululo]
Isamsung ichaza ukuba bayikhethe njani imibala yeGPS S10